‘म पुनः संसार हेर्न चाहन्छु’ : राजकुमार राई - Sagarmatha Online News Portal
‘म पुनः संसार हेर्न चाहन्छु’ : राजकुमार राई
आँखाको ज्योती गुमेपछि अप्रेशनका लागि आर्थिक सहयोगको अपिल
सोलुखुम्बु । विगत १० वर्षदेखि पर्यटक भरियाको रुपमा पर्यटन क्षेत्रमा लागिरहेका राजकुमार राईको आँखामा एक्कासी समस्या देखियो । बरुञ्जे हिमाल आरोहण गर्दै गर्दा बीचमै चस्मा खसेर फुटेपछि राईले आँखाको ज्योती गुमाएका हुन् ।
सोलुखुम्बु जिल्लाको महाकुलुङ गाउँपालिका वडा नं. ४ स्थित सामान्य परिवारमा जन्मिएका राईको बाल्यकाल पनि कष्टकर रुपमै बितेको थियो । राईको परिवार संयुक्त भएकाले किशोरा अवस्थामै उनी पढाई छोडेर पर्यटक भरिया बन्न खुम्बुतिर लागे । सन् २०१० बाट उनले पर्यटक भरियाको रुपमा ट्रेकिङ क्षेत्रमा लागेका थिए । अहिले उनी पर्यटक गाईड (पथप्रदर्शक) भएका छन् ।
राईले आँखाको ज्योती गुमाएपछि हिमालयन म्याजिक ट्रेक्सका डाईरेक्टर नविन कार्कीले उनलाई अप्रेशनको लागि केहि रकम सहयोग गरे । राईले पनि केहि रकम व्यवस्थापन गरेर आँखाको अप्रेशन त गरे । तर, उनको आँखाको ज्योती पहिलेको जस्तो फर्किएन । पुनः अप्रेसन गर्नुपर्ने भएकाले पिडित राईले सहयोगी मनका धनीहरुलाई आर्थिक सहयोगको अपिल गरेका छन् ।
गत फागुन २२ गते एउटा आँखाको र चैत ९ गते अर्को आँखा गरी दुईवटै आँखाको अप्रशन गरिएको थियो । ‘अहिले अलिअलि देख्न सक्छु, त्यो पनि एक मिटर अगाडि ठूलो वस्तुलाई मात्रै ।’ पिडित राईले भने, ‘तत्कालै फेरी अप्रेशन गरिएन भने डाक्टर आँखाको पुरै ज्योती गुम्छ भनेको छ । अलिअलि भएको पैसा पनि पहिलेनै सकियो । अस्ति अप्रेशन गर्ने पैसा पनि नविन सर र ऋण काढेर गरेको हो । अझै डाक्टरले आँखाको अप्रेशन चाँडै गर्नुपर्छ भनेको छ । त्यसैले मसँग अहिले बिहान बेलुकीको छाकटार्न पनि धौधौ छ । त्यसैले आर्थिक सहयोग मागेको हो ।’
‘अहिले म काठमाडौंमा साथीको कोठामा बसिरहेको छु । मैले केहि चिनेजानेका साथीहरुसँग ऋण मागे तर उनीहरुको पनि कोरोनाले गर्दा आर्थिक अवस्था नाजुक भएकाले दिन सकेनन् ।’ राईले भने, ‘यदि तपाईहरुले मलाई सहयोग गर्नु भयो भने म पुनः पहिलेको जस्तै देख्न सक्छु । त्यसैले अन्तिम अवस्था आएकाले मैले तपाईहरुसँग आर्थिक सहयोग मागेको छु ।’
पिडित राईको श्रीमती, २ छोरा छन् । हाल उनको परिवार नाम्चेबजारमा बसेका छन् । राईलाई सहयोग गर्न चाहनु हुने मनका धनी महानुभावहरुले, राजकुमार राई, सिद्धार्थ बैंक शाखा नाम्चेबजारको खाता नं. ०२८१५०१४९७५ मा सहयोग रकम जम्मा गर्न सक्नुहुने छ । अथवा ९८४२८६८११५ मा प्रत्यक्ष रुपमा सम्पर्क गरेर पनि सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ ।